Imaaraadka oo si kulul uga jawaabay hadal kasoo yeeray Turkiga
By WARIYAHA ABU DHABI , GAROWE ONLINE
ABU DHABI, United Arab Emirates – Imaaraadka Carabta ayaa si kulul wuxuu uga jawaabay hadal dhowaan kasoo yeeray Wasiirka Gaashaandhiga Turkiga, Hulusi Akar oo khuseeyay xaaladda Suuriya iyo Liibya.
Anwar Gargash, wasiiru dowlaha arrimaha dibadda xukuumadda Abu Dhabi oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Twitter-ka, ayaa ku sifeeyay dhawaaqa dhigooda Ankara "kuwa dareen kicin ah".
Isagoo hadalkiia sii wata, Gargash ayaa si furan wuxuu ugu waaniyey Turkiga in uu joojiyey "faragelinta qadiyadaha wadamadda Carabta".
"War-saxaafadeedka kicinta ah ee ]Wasiirka] Wasaaradda Difaaca Turkiga waxay daaran tahay [fashilka] diblumaasiyadda dalkiisa…Xiriirka laguma maareeyo hanjabaadyo iyo faragelin, waqti xaadirkaan boos uma banaana faragelinta qabiilka, waxaana u wanaagsan Turkiga in uu joojiyo faragelinta arrimaha Carabta," ayuu Gargash kaga dhawaajiyey fariintiisa.
Akar ayaa shalay u sheegay warbaahinta maxaliga ah ee Turkiga in Imaaraadka uu "falal xaasidnimo ah" ka sameeyo Suuriya iyo Libya, waxaana uu carabka ku dhuftay in ay wax ka qaban doonan.
Suuriya iyo Libya oo tobanaan sano ay ka aloolsan yihiin colaado sokeeye ayaa kamid ah furimaha ay murqahooda ku tijaabiyaan awoodaha Galbeedka iyo Carabta ee u han-qaltaagaya kala sareynta.
Dhinacyadda oo sahay iyo hub ku taageera dagaalamayaal hubeysan ayaa hawada isku mari hadalo xanaf leh oo dagaalada huriya, iyaddoo shacabka ay yihiin kuwa ugu badan ee waxyeladda ay kasoo gaarto.
Dagaal-wakiileedka oo karaar-qaatay bilooyinkii lasoo dhaafay ayaa sarre u qaaday walaaca ku aadan in dalalka qudhooda ay fooda is-daraan, maadaama ay joogitaan ciidamo ku leeyihiin gudaha wadamadaas.
Dagaalka afka ee dalalka Faransiiska iyo Turkiga oo weji cusub yeeshay
Caalamka 25.06.2020. 11:45
Wadamadan kawada tirsan gaashaanbuurta NATO ayaa hawada isu mariyey hadalo kulul.
Imaaraadka oo war kasoo saarey weerar ka dhacay duleedka Muqdisho
Caalamka 19.01.2020. 11:48
AMISOM oo ka digtay in dalal kala duwan ay tababar siiyaan Ciidanka Soomaaliya
Soomaliya 18.05.2018. 14:53
Turkiga oo balanqaad horleh u sameeyay Xukuumadda Soomaaliya
Soomaliya 29.10.2020. 19:00
Turkiga oo iska fogeeyay eedeyn la xiriirta Soomaaliya oo loo jeediyey
Soomaliya 05.08.2020. 12:40
Qadar oo wadda qorshe ka dhan ah macdanta uranium-ka ee Soomaaliya
Soomaliya 03.06.2020. 17:30
Shirkada diyaaradaha Imaaraadka oo xayiraad kusoo rogtay Soomaaliya
Soomaliya 27.02.2020. 17:50
Khasaaraha qaraxii Muqdisho oo sii kordhaya iyo dad la la'yahay
Soomaliya 30.12.2019. 10:23